Home / Blog / Sarobidy loatra loatra koa ireo trano fandroana ireo, efa hitanao ve izy rehetra?
2021 / 04 / 21 FisokajianaBlog 3692 0
Lohatenin'ny kabone fandroana vaovao
Ny efitra fandroana dia toerana izay matetika no kitihintsika isan'andro, ary ny fahadiovany, fitehirizana ary fandaminana azy, ary ny famoronana ny atmosfera dia mifandray akaiky amin'ny tsiron'ny tompony. Ao ambadiky ny famolavolana trano fidiovana avo lenta dia tsy maintsy miafina fanahy marefo. Saingy ny fomban'ny taloha ihany amin'ny fanaovana paving, tsy azo ihodivirana fa hahatonga ny olona hahatsiaro ho mankaleo. Androany izahay dia mizara ny sasany amin'ireo teknika fanodinodinam-bolo kokoa, mahaliana kokoa hamoronana fanasongadinana ho an'ny haingon-trano tsy manjary!
Na ny toetran'ny lamaody na amin'ny lamaody an'ny tile dia mety ho lasa fitaovana manintona ny maso anatiny. Izy io dia loko mamirapiratra, lamina, firafitra dia manintona ny maso. Na ho toy ny atsy ambadiky ny fampisehoana, na faritra kely amin'ny haingon-trano eo an-toerana, dia afaka mijinja ireo vokatra tsy nampoizina ianao, mba hanatsarana tampoka ny fomban'ny fandroana.
Kolozy efajoro mahazatra
Ny famafazana taila eo afovoan'ny lalàna, mba hitondra filaminana. Tsipika madio, feo tsotra sy mamirapiratra, ary ny tora-pasika dia manome fahatsapana fahamendrehana, manome ny olona traikefa an-tsary tsy manam-paharoa.
Raha te handrava ny fahatsapana fifehezana milamina sy milamina ianao dia azonao atao ny mampiasa fanovana tsipika miserana, toy ny I-beam mba hanatsarana ny hatsarana sy hampisehoana ireo sosona misavoana.
Rindrina mitovy loko sy gorodona gorodona
Ny fomban'ny gorodona sy gorodona mifanaraka amin'izany dia azo ampiasaina ho fanitarana maso, hahatonga ny habaka ho malalaka kokoa, foana ary miaraka amin'ny fahatsapana fahamendrehana matanjaka.
Ny rindrina sy ny gorodon'ny gorodona dia samy hafa loko
Ny feo sy ny fomban'ny rindrin'ny rindrina sy ny gorodona dia mahomby kokoa amin'ny famoronana fahatsapana ambaratonga ambony. Amin'ity vanim-potoanan'ny fanehoan-kevitry ny tsirairay ity, tsy mahazatra, originality, hahatratrarana ny famolavolana habakabaka miavaka.
Previous :: Fa maninona no tsara tarehy foana ny fandroana an'ny olon-kafa? Next: Ny voalohany eto an-tany! Fandroana fandroana azo antoka sy mahasoa, noho izany dia afaka "mandro" amin'ny haingam-pandehanao ianao
2021 / 06 / 08 2693
2021 / 05 / 28 3129
2021 / 04 / 22 4636
2021 / 04 / 22 3769
2021 / 04 / 12 3240